‘भ्यालेन्टाइन डे’ सम्बन्धी टिप्स, मेकअप र रोचक तथ्यहरुः यसरी राख्नुहोस् आफ्नो प्रेम प्रस्ताव ! – Nepali Audio Video
‘भ्यालेन्टाइन डे’ सम्बन्धी टिप्स, मेकअप र रोचक तथ्यहरुः यसरी राख्नुहोस् आफ्नो प्रेम प्रस्ताव !
प्रणय दिवस अर्थात ‘भ्यालेन्टाइन डे’ विश्वभर नै मनाईने गरिन्छ । पछिल्लो समय ‘भ्यालेन्टाइन डे’को प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै गएको छ । नेपालमा पनि युवा–युवतीहरु भ्यालेन्टाइन डेलाई विशेष रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।
भ्यालेन्टाइन डे को दिन अमेरिकामा मात्रै १९ करोड बराबरको गुलाबको फूल किनबेच हुन्छ । गुलाबको फूललाई इटालीको रोममा प्रेमको देवीको मनपर्ने फूल पनि भनिन्छ ।